Rosia: Tantara tsangana “handrafetana indray” ny fahafatesan’ilay mpisolovava Magnitsky · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2019 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Español, Português, Italiano, English
Namoy ny ainy tao amin'ny fonjan'i Moskoa i Sergei Magnitsky, Rosiana mpisolovava momba ny hetra 37 taona rehefa avy nigadra tsy nandalo fitsarana nandritra ny herintaona teo ho eo ary tsy nahazo fitsaboana ara-pahasalamana ampy.
Nahazo fitantarana goavana tany Rosia (RUS) sy tany ivelany (ANG) ny toe-javatra nahatonga ny fahafatesany. Navoaka ihany koa ireo taratasy sy antso nosoratany tany am-ponja (dikanteny amin'ny teny Anglisy tamin'ny taratasy iray – ao amin'ny RFE / RL, orizinaly amin'ny teny Rosiana naraiki-tsary misy ireo antontan-taratasy nosoratana an-tanana sy notendrena tamin'ny milina - ao amin'ny NewTimes.ru). Namoaka fanadihadiana momba ny fepetra nijanonan'i Magnitsky tao amin'ny fonja (amin'ny teny Rosiana sy amin'ny teny Anglisy – ao amin'ny bilaogy Law and Order in Russia) ny Vaomieram-panjakana mpanaramaso ny zon'olombelona ao amin'ny fonjaben'i Moskoa .
Noho ny fivoahan'ny vaovao, namaly tamin'ny fandroahana manampahefana ambony maromaro ny manampahefana Rosiana – ary koa nandràra ny fitazonana am-ponja vonjimaika ireo ahiahiana amin'ny fandikàn-dalàna ara-ketra ary namolavola “volavolan-dalàna izay manakana ny fisamborana ireo mpanatanteraka noho ny ankamaroan'ny heloka bevava ara-toekarena” (rohy teny anglisy mankany amin'ny lahatsoratra ao amin'ny Moscow Times).
Mitohy ny adihevitra momba ny fepetram-pamonjana, nateraky ny fahafatesan'i Magnitsky – ary azo inoana fa hiditra amin'ny dingana vaovao izany: eo am-pamolavolana ny tantara izay “handrafetana indray” ny horohoron'ny ora farany niainan'i Magnitsky i Mikhail Ugarov (mpisera LJ m_u), mpilalao sarimihetsika mahatsikaiky sady tale ara-java-kanto ao amin'ny Teatr.doc (RUS), teathra ao Moskoa miompana amin'ny lahatsary fanadihadiana mampalahelo.
Ity no nosoratan'i Ugarov (RUS) tao amin'ny bilaoginy tamin'ny 22 Jan :
Miasa amin'ny tantara tsangana ao amin'ny Teatr.doc momba ny fahafatesan'i Sergei Magnitsky.
Aleksey Devotchenko [Rosiana mpiantsehatra] no hanao izany.
Eo an-dalana ny fanangonana fitaovana. Fitaovana izay mahatonga ahy harary ara-batana.
Maty tanaty fitafian'ny gadra i Magnitsky. Nangirifiry noho ny aretin'ny sarakaty izy, fa akanjon-gadra no nampitafian-dry zareo azy. Ary nandany adiny iray sy 18 minitra tamin'izany izy. Ary tsy hita mihitsy ilay dokotera.
Maty noho ny “aretim-po” izy. Heveriko fa nijanona fotsiny ny fony.
Raha manao fandrafetana hita maso fotsiny amin'ireo zava-nitranga ireo (arofenitry ny fihetsehana ara-batana) ny mpiantsehatra dia harary ny mpijery …
Aorian'izany rehetra izany, tsy mila zavatra aho, tsy te-hieritreritra, tsy te-hahatsapa.
Ary ao amin'ny teathra goavana, avelao izy ireo hamerina indray ny fomba nitifiran'i Konstantin Gavrilovich ny tenany [Konstantin Gavrilovich Treplyov, olona lalaovina ao amin'ny The Seagull [la mouette- ilay kilelo] an'i Anton Chekhov].
Ary ity misy fanavaozam-baovao(RUS), navoakan'i Ugarov tamin'ny 2 Febroary:
Omaly indray dia nanatrika fivoriana mikasika ny fahafatesan'ilay mpisolovava Magnitsky izahay.
Tsy araka ny namaritako azy ireo ny zava-nitranga – mahatsiravina kokoa, raha ny marina ny zava-drehetra.
Hoy izy tamin'ilay dokoteran'ny fonja, “Te hamono ahy ry zareo.” Ary noho izany, dia hitany fa mikorontana ara-tsaina izy. Ary niantso ireo antsoina hoe “fanamafisana indray” – mpiambina fonja valo zatra midaroka ireo [gadra]. Ary niantso mpitsabo areti-tsaina izy.
Ary lasa izy, toy ny hoe tsy nisy na inona na inona nitranga. Fantatra ny anarany, manao akanjo fotsy ity vehivavy ity, “Dokotera Rafahafatesana.”
Tonga ny ekipa mpamonjy voina (ireo antsoina hoe mpitsabo areti-tsaina), saingy nandritra ny adiny iray sy 18 minitra, tsy afaka naditra tao amin'ny marary izy ireo. Ary rehefa navela hiditra nony farany izy ireo, dia nahita lehilahy maty. Avy eo dia nidina ihany koa ilay dokotera, mba hijery … Nijoro teo amin'ny lalantsara nandritra ny adiny iray sy 18 minitra ny mpanampy mpitsabo Vasya (tsy tena anarany) ary tsy mahafantatra hoe inona no nataon'ity brigady “fanamafisana indray” ity tamin'ny olona marary …